Main Ngwa: Ude, suppositories, ude. N'ihi ebe mgbaze dị elu na ọtụtụ mmiri na-agbaze mmiri, na-eji naanị ya ma ọ bụ jikọta ya na ihe mgbaze ndị ọzọ, polyethylene glycol 1000-4000 nwere ike inyere aka mezuo ebe mgbaze ebe oge na ebe nchekwa dị na akara na ọgwụ chọrọ na mmetụta anụ ahụ. Mgbakasị sitere na PEG matrix suppository dị obere karịa nke sitere na matriks mmanụ ọdịnala. Mbukota Method: 50kg plastic drum Quality Standard: CP2015 adị ndụ: Thre ...
Main Ngwa: Ude, suppositories, ude. Ngwakọta kwesịrị ekwesị nke polyethylene glycol nwere ụfọdụ mado-agbanwe agbanwe (dị ka PEG300 na PEG1500 ngwakọta site na nha anya hà nha), ihe ndị a na-eme ka ha nwee ọfụma mmiri ka mma yana ezigbo ndakọrịta na ọgwụ ndị ọzọ, yabụ enwere ike iji ya dị ka mkpụrụ Ude. . Mbukota Method: 50kg plastic drum Quality Standard: CP2015 adị ndụ: Afọ atọ Nchekwa na ationgbọ njem: Ngwaahịa a na-abụghị na-egbu egbu, ire ọkụ retardant, dị ka a g ...
Isi Ngwa: Mkpụrụ molekụla nke Polyethylene glycol 600 buru ibu karịa nke Polyethylene glycol 400 ebe nnukwu solubility dị na mmiri pere mpe site na ntụnyere n'etiti ha. Polyethylene glycol 400 bụ mmiri mmiri ma nwee njikọta sara mbara na ihe mgbaze dị iche iche, ya mere ọ bụ ezigbo ihe mgbaze na solubilizer ma na-ejikarị ya eme ihe na mmiri mmiri, dị ka ngwọta ọnụ, anya mmiri na ihe ndị ọzọ. Mgbe mmanụ ihe oriri adabaghị maka ihe na-arụkọ ọrụ na-arụ ọrụ, ...
Isi Ngwa: Polyethylene glycol 400 ruru eru iji kwadebe maka capsule dị nro kachasị. Polyethylene glycol 400 bụ mmiri mmiri ma nwee njikọta sara mbara na ihe mgbaze dị iche iche, ya mere ọ bụ ezigbo ihe mgbaze na solubilizer ma na-ejikarị ya eme ihe na mmiri mmiri, dị ka ngwọta ọnụ, anya mmiri na ihe ndị ọzọ. Mgbe mmanụ ihe oriri anaghị adabara maka ihe na-arụkọ ọrụ na-arụkọ ọrụ, polyethylene glycol bụ ihe mgbakwunye kachasị mma n'ihi na polyethylene glycol bụ sta ...